Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment उच्च विन्दुमा पुगेर रोकिएको सुनको भाउ आज कति ? - Pnpkhabar.com
उच्च विन्दुमा पुगेर रोकिएको सुनको भाउ आज कति ?
काठमाडौं, २६ साउन : आज साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ स्थिर रहेको छ। अघिल्लो साताको आइतबार १९ गते ६६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ साताभरि लगातार बढेर ७० हजार रुपैयाँ पुगेर रोकिएको थियो।
शुक्रबार स्थिर रहेको सुनको भाउ आज आइतबार पनि स्थिर नै रहेको छ।
त्यस्तै आज तेजावी सुन भाउपनि स्थिर रहेको छ। बिहिबार प्रतितोला ६९ हजार ७ सय रुपैयाँ कारोबार भएको तेजावी सुन शुक्रबार र आज आइतबार पनि सोहि मुल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यसैगरी आज सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि स्थिर रहेको छ। आज चाँदी प्रतितोला ८ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ।
सुनको भाउ ओरालो लाग्यो, तोलामा कति ?
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ
प्रधानमन्त्री ओली फेरी अस्पतालमा
महिला हिंसा रोक्नको लागि आर.एन. वुमेनको १६ दिने अभियान सम्पन्न
साग खेलकूद सफल र ऐतिहासिक : प्रधानमन्त्री ओली